Ukubhema - umkhuba othile omubi kakhulu, Nokho Namuhla abantu abaningi baqala ukuba izitike lo mkhuba omubi, ikakhulukazi esemncane. Akukona ukulalela izixwayiso ngezingozi ephefumula asebenzayo lentuthu kagwayi. Ngokuhamba kwesikhathi, lo muntu uyazi ingozi yokulutheka kanye ufuna ukuyeka, kodwa ukuncika ugwayi ngezinye izikhathi namandla kunomFilisti isifiso ukuyeka. Kulokhu, basisize ugwayi electronic Smokoff.
Eqinisweni, Onjiniyela e-ugwayi e plan yasekuqaleni wakhulelwa nje esikhundleni umkhiqizo yemvelo-nicotine nentuthu eningi kwi esikhundleni ayinangozi ngoba lokho ngeke zibulale umzimba womuntu.
Noma kunjalo, ngiyabonga ukuba angene esikhundleni ugwayi kwencika kancane kancane wean abantu ekubeni umlutha. Ugwayi Electronic le Smokoff, kanye nicotine patch, engena emzimbeni umthamo encane nicotine, kodwa ngokungafani izitikha, umkhiqizo electronic kudala inkohliso ukubhema. Ngenxa yalokhu ukungakhululeki ngokwengqondo uphonsa negated.
Kanjani ukuyeka ukubhema nezimo ugwayi elekthronikhi?
Into yokuqala ukuze ufunde okunye esikhundleni abavamile ugwayi electronic. Emini, kutuswa ukuba ngibheme umkhiqizo kagwayi yemvelo 2-3 kuphela. Ngesikhathi cartridges efanayo ibiza ukuthenga i-nicotine esikhundleni, njengoba esigabeni sokuqala akunakwenzeka ukuphuca umzimba umthamo ngqo evamile zomuthi. Isiteji lokuhoxa akufanele kuhlale isikhathi esingaphezu kwesonto.
Thrower kudingeka ayeke ngokuphelele ukubhema ugwayi njalo, yize lo muntu angase ahlale umuzwa ukunganeliseki ukusetshenziswa esikhundleni sendodana yakhe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, futhi ngeke sidlule.
Ukuze-ke usungaqala kuka inyanga eyodwa ngemuva kokuqala ukusetshenziswa ugwayi electronic. Ngalesi sikhathi umuntu wean ngokuphelele ukubhema ugwayi, futhi kungenzeka ukunciphisa umthamo nicotine. Le nkathi kufanele ihlukaniswe izigaba ezimbili.
Phakathi neminyaka yokuqala kancane kancane ukunciphisa umthamo izidakamizwa, ukuthenga cartridges ne wake wehlise nokuqukethwe kwalo. Ngesikhathi esigabeni sokugcina, ungathenga yamathebhu ngokuphelele ngaphandle nicotine.
Futhi ngemva kwenkathi ethile yesikhathi kuhle ukucabangela: yini okushiwo ngibhema ngaphandle izidakamizwa? Futhi uma yalo ayitholakali, kubalulekile ngokuphelele kulo mkhuba ukusebenzisa imikhiqizo kagwayi.
Kuyaphawuleka ukuthi isifiso sidonsa ugwayi elekthronikhi ukuba kancane kanzima ukuwenqaba. Kodwa lokhu Kuxhomeke isikhathi.
Kuyini ugwayi electronic Smokoff?
Imikhiqizo yalesi brand ungumholi emakethe phakathi kwezinye analogue. Electronic Ugwayi Smokoff sihlelwe ngendlela yokuthi okungenani ukugeleza izinga igobolondo uketshezi, ngaphezu ingasetshenziswa ngokushesha emva kokuthenga, badinga kuphela thina ukufaka capsule ukuthi aqede ngokuphelele ukungenisa carcinogens equkethwe ugwayi ezivamile.
Ugwayi ubukeka nenhle, kodwa ngesikhathi esifanayo unika umuntu okuqinile. imikhiqizo kwesitayela abe ebanzi kakhulu umbala ububanzi. Ngaphezu kwalokho, ukumisa kwabo kwenza kube nokwenzeka ukuba usebenzise into, esikhundleni okudlekayo, okuyizinto cartridges for electronic ugwayi Smokoff.
Kulabo abafuna ukuyeka ukubhema, ke kangcono Smokoff - ugwayi electronic, yokusetshenziswa okuyinto ulula. Kuwufanele ukukhumbula imithetho embalwa:
Awukwazi ukusebenzisa ugwayi nge igobolondo ezingenalutho, okuyinto efakwe ekuqaleni. igobolondo Liquid kuhlanganisiwe.
Kufanele kahle ukwenza kokuqina. Bona lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako kahle futhi ngokulinganayo. kokuqina Kweseva kungalimaza generator umusi.
Umkhiqizo Kunconywa ukuba adede sufaka nomsebenzi ibhethri isikhathi eside.
Igobolondo kumele amanye ne liquid kuncike umthamo yayo. Lokhu kungase kube okungenani 5 amathonsi, esiphezulu 90. I igobolondo kufanele igcinwe kuze kuphele isigamu sehora kangangokuthi uketshezi oluhamba is nombala basakaza kulo ethangini.
Ngakho ukuthi ketshezi akusho hit emlonyeni, ayikwazi imisiwe kakhulu futhi ugcine igobolondo ugwayi phansi.
Indawo eyiyo workpiece - nendawo noma i-engela 30 0.
Idivayisi kuyinto ugwayi electronic
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa, udinga ukwazi ukuthi ugwayi elekthronikhi kuhlelwe Smokoff. Ngezinye ichopho umkhiqizo has a ukukhanya ukubonisa isimo sebhetri.
Kuyadingeka ukuba batadishe refilling uhlelo igobolondo, kusukela ukusetshenziswa imikhondo esingenalutho ukuze ukwehluleka kudivayisi. Futhi ungakhohlwa ukushaja umkhiqizo, bentambo likhona ibhokisi.
Amazwana mayelana ugwayi electronic
Ukuze ahlaziye kahle zonke izinzuzo ukuyeka ugwayi ngosizo engathatha, kufanele wazi ukuthi ufunde nokubuyekeza electronic ugwayi Smokoff. A umbono ikhasimende ibonisa ukuthi mkhiqizo ephumelela kakhulu uma ufuna ukuyeka ukubhema. Sibonga kakhulu ugwayi elekthronikhi, besusa lo mkhuba futhi waqala ahole indlela yokuphila enempilo.
Ufuna ukuyeka ukubhema? Sebenzisa i-nicotine acinene spray!
Amakhambi okwelapha: chamomile. Ukutshalwa izakhiwo ewusizo kanye contraindications